Sangano revashandi vepuratifti rinoisa France mukutungamira kwehutano hwevanhu muEurope '- TELES RELAY
HOME » pasi rose »Platform Workers 'Charter" inogadza France mukutungamira kwekugara kwevanhu muEurope "
Jenerali Mukuru weEurope yeDeliveroo
Alessandro Celli, musoro Deliveroo pachikuva, anoti munyaya mu "World" muchifarira kuitwa kubudikidza vevatariri ari kuwedzera kuti "Map" munzanga kodzero Independent Online.
Yakatumirwa pa 14 April 2019 pa 17h00, yakashandurwa pa 16h46 Nguva yeku Kuverenga 3 min.
"Vatadzi vaviri kubva kune vatatu vanonzi Deliveroo vaizorega kushanda pamwe nekambani kana vaizova vashandi, maererano neongororo yakaitirwa Deliveroo neHarris Interactive mu2018. »JACQUES LOIC / Photononstop
wechuru. Apo mumwe ari mutorwa uye anofunga nezveFrance, mumwe anowanzotaridza tsika yake yakasimba yekutonga kwekutonga uye yehupfumi hwake. Mwedzi ichangopfuura yapfuura zvakare yakaratidza kuti France yaiziva nzira yekukurukurirana nekukakavadzana, mumataundi egutaji, dzimba dzekuvakidzana, dzimba dzemumusha, kunyange mumakambani. Mumwedzi ichangopfuura, yakaratidzawo chido chayo chekuchengetedza chiFrench chimiro chevanhu pamwe chete nekuchigadzirisa nenzira itsva dzekushanda.
Vazhinji veEuropean States varikubvunza mubvunzo mumwecheteyo: sei kusimbisa kusununguka kwehupfumi hwevashandi vepuratifomu pasina kuparadza rusununguko rwunoitwa nevashandi ava? Tinofanira kusika imwe nharaunda yemagariro? Zvichida kwete. Pane humwe hutano hwemagariro evanhu vanozvishanda here? Tinofanira kuvapa zvimwe kana zvishoma here? Ko makambani anoshuva kuita izvozvo ngaabvumirwe kupa vakadaro kodzero kune vanozvishanda navo vanobatana navo?
Chirevo chakachengetwa kune vatinyoresa Verenga zvakare Kudzivirirwa kupi kune vashandi vechikwata?
Kuvandudzwa kwemaitiro matsva ekushanda kushanduka ndezvechido chaicho kune vechidiki kana vanhu vanotsvaka mari yakawanda. Deliveroo's delivery partners anobata chiyero chemaawa gumi nemashanu pavhiki uye anowana 13 euros nemaawa. Zvishamiso izvi, zvisinei, zvinouyisa mubvunzo pasina kukwidza: sei kuvadzivirira zviri nani munzanga? Munhu akazvimirira haana kodzero yezororo rinorwara.
Kana boka iye anoshanda anopa semuenzaniso mahara, mamwe inishuwarenzi, zvichava chinhu indekisi pedyo requalification uye nokudaro kuguma mukana wokushandiswa kunozivisa izvi itsva nzira yokushanda. Pana Deliveroo, hatina kare akaita sarudzo kupa pachena inishuwarenzi vose makurukuriro yedu kubva kweeuro ose turnover rokutanga.
Chirevo chakachengetwa kune vatinyoresa Verenga zvakare "Kubvunza mubvunzo wekuchengetedzwa kwevanhu vevashandi vepuratifomu ndeyekuita izvo zvekuchengetedzwa kwehupfumi hwevanhu vanozvidzivirira"
Hurumende French yave kunzwisiswa, uye bumbiro pakutanga dzataurwa nokuda nhengo Aurélien Taché (LRM Val-d'Oise) uye inokurukurwa shomanana iri Assembly chikuru budiriro kuti aizosangana kwokudiwa vezviuru izvi rakazvimirira vanosarudza izvi itsva nzira yokushanda.
Sezvo Bhuku re Etat rinotsanangura mumutsotsi unodzidza pamusoro pemutemo, iri gwaro "Chinangwa chokuvandudza kodzero dzevanhu dzevashandi" usadzoka zvakare "Kodzero yevanhu kuti vashandise mushonga wekutonga hunobudirira hunosimbiswa neMutemo", zvichibvumira kuti zvigone kubhadharwa.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/14/la-charte-des-travailleurs-de-plate-forme-place-la-france-en-leader-de-l-innovation-sociale-en-europe_5450040_3232.html?xtmc=france&xtcr=3
Comment les règles de la reine ont obligé Lady Gabriella à changer de robe de mariée – “Respectez la tradition!”